Kwete zvese zviri sezvauri kuronga ... zviuru zvinokumbira Stallman kuti adzose kuraira uye asiye | Linux Vakapindwa muropa
Iko kumanikidza kunowedzera nguva dzese dzaRichard Stallman (RMS) mushure mekunge wazivisa kuti wadzoka neFree Software Foundation (FSF) uye ndizvo zviuru zvevanhu zvakasimudza manzwi avo kuitira kuti adzingwe yesangano raakagadzira uye raanga ari mucherechedzo kwemakumi emakore. Muchokwadi, zvichitevera maitiro eiyo Open Source Initiative (OSI), mazana evatsigiri vemahara software vakasaina tsamba yakavhurika vachikumbira muvambi weFree Movement kuti adzore apuroni yake, asiwo nekanzuru yese yemahara yesoftware.
La Yemahara Software Foundation isangano isina purofiti yakavambwa naRichard Stallman muna 1985 nechinangwa chekusimudzira yemahara software. Kubva ipapo, akabata chigaro chemutungamiri wenyika yeFSF mukuwedzera pakuve nhengo yebhodhi revatungamiriri, kusvikira akamanikidzwa kusiya chigaro mu2019.
Semhedzisiro yechinzvimbo chaakafungidzira mune Epstein kesi izvo zvinoreva kushungurudzwa pabonde kwevana vadiki. Gore iro, Richard Stallman akataura nezvenyaya yaMarvin Minsky, MIT nyanzvi yehunyanzvi hwekuchenjera yaaitaridzika seshamwari. Marvin Minsky akapomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe wevakabatwa naJeffrey Epstein. Asi mukutaura, Stallman akabvunza chiito ichi achifunga kubatwa chibharo nekumutsa mhando yemvumo kune uyo akataura. Mashoko aya akatsamwisa vese MIT uye yemahara software nharaunda, zvichikurudzira RMS kusiya zvigaro zvavo paMIT neFSF.
Asingasviki makore maviri gare gare, RMS inosaina kudzoka kwayo kuFree Software Foundation (FSF), zvirinani senhengo yedare revatungamiriri uye pamwe nechinangwa chekutora matomu esangano raakagadzira.
Ndine chiziviso chekuita. Ndadzoka kubhodhi reFree Software Foundation… Vamwe venyu muchafara pamusoro peizvi, uye vamwe vachanyadziswa, asi ndiani anoziva? Chero zvazvingava, zvakadaro, uye handina chinangwa chekusiya basa kechipiri, ”akazivisa panguva yeFSF LibrePlanet chaiyo chiitiko.
Ichiratidza kutsamwa pakudzorerwa kwaRichard Stallman, iyo Open Source Initiative (OSI) yakazivisa kuti icharega kubatana neFree Software Foundation kana RMS ikasasiya basa kubva kuboka revatungamiriri.
Uye ndeyekuti ingangoita panguva imwechete iyo OSI yakashora kumiswazve kweRMS, mazana evashandisi vemahara software vakanyora tsamba kuvhura achida kuti arege basa uye nenhengo dzese dzedare.
Pakati peavo vakasaina tsamba iyi pane vanogadzira, vateresi uye vakuru vakuru yemasangano akasununguka uye akavhurika uye mapurojekiti, kusanganisira iyo GNOME Foundation, iyo Open Source Initiative, Software Freedom Conservancy, Apache Software Foundation, Wikimedia Foundation, EFF, nezvimwe. Kune zvekare vadzidzi uye kunyange aimbova MEP kubva kuSweden Pirate Party, mune iyi nyaya Amelia Andersdotter. Wese munhu anotaura zvinopesana nemufambiro unofungidzirwa kusadikanwa neRMS, iyo yavanofunga kuti munzwa parutivi rwemahara uye yakavhurika sosi software nharaunda.
Richard M. Stallman agara ari simba rine njodzi mune yemahara software nharaunda. Iye anga ari misogynistic, anokwanisa uye transphobic, pakati pekumwe kupomerwa kwakakomba kwekusakodzera. Aya marudzi ezvitendero haana nzvimbo mune yemahara software, kodzero yedhijitari, uye nharaunda dzehunyanzvi. Nekudzoreredzwa kwake munguva pfupi yapfuura mubhodhi reFree Software Foundation, tiri kudaidzira kuti bhodhi rese reFSF risiye basa uye kuti RMS ibviswe pazvinzvimbo zvese zvebasa
Isu [ivo vanosaina] tinotenda mukuda kwekuzvimiririra kwedhijitari uye nesimba rine simba rinoitwa nevashandisi verusununguko mukuchengetedza kodzero dzedu dzevanhu. Kuti uzadzise vimbiso yezvose izvo software yerusununguko inoita kuti zvivepo, panofanirwa kuve nekuchinja kukuru mukati menzanga. Isu tinotenda mune iripo neramangwana apo tekinoroji inosunungura, isingadzvinyirire, vanhu. Isu tinoziva kuti izvi zvinokwanisika chete munyika umo tekinoroji yakagadzirirwa kuremekedza kodzero dzedu pamatanho avo akakosha. Nepo pfungwa idzi dzakakurudzirwa neimwe nzira naRichard M. Stallman, haatauri kwatiri. Hatitenderi zviito zvako kana maonero ako. Hatizive hutungamiriri hwake kana hutungamiriri hweFree Software Foundation sezvazviri kuratidzwa nhasi ”, tinogona kuverenga mutsamba yakavhurika. Asati anyanya kuita hasha nemuvambi weFSF.
Sezvo kana izvo zvisina kukwana irikudana kune vanotsigira nenhengo dzese dzemunharaunda kuti varatidze FSF naRichard Stallman.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kwete zvese zviri sezvauri kuronga ... zviuru zvinokumbira Stallman kuti adzose kuraira uye aende
Richard M. Stallman, munhu asingateveri mhomho segwai, ane hunhu husingazungunuke nehana yemagariro, anofanirwa kuyemurwa nekuombera, ndinonzwisisa kuti pane nyaya dzaasingaite nemazvo sezvaitarisirwa, asi pachinzvimbo yekuzviparadzanisa nekumupa mhosva, nekuti asingasvike pakumubatsira kuti anzwisise zviri nani mamiriro ezvinhu aakaoneswa, chero munhu anodzidza nekukanganisa kana asingakwanise kugadzirisa, dambudziko revazhinji vevanamuzvinabhizimusi kana vanhu vari munzvimbo dzekutarisira nderekuti vane zvakaipa vanachipangamazano, uye zviri nekuda kwekusaziva kwakadai kuti vanoona vanhu vakaita saRichard Stallman kana marezenisi eGPL sekutyisidzira, kusaziva kunowedzera kutya nemakaro, kubva mumaonero angu tinofanira kuisa parutivi unyengeri nekuzvikudza, kuzvininipisa kubvuma izvo zvatisingazive zvese uye izvo isu tinofanirwa kudzidza kubva kune vamwe, tinzwisise nzvimbo yavo uye toedza kuzviisa mushangu dzavo kuti tione kuti nei vasvika pane imwe mhedziso. Zvakanakisa, kubudirira mumabasa ako uye vhiki inofadza.
Avo vanoda kuti Stallman abve zvekare ndevaya vanoda kukanganisa software yemahara.
Gamuchira zvakare RMS
Luigino Bracci Roa akadaro
Zviuru zvevamwe vari kutsigira Richard Stallman, vachida kuti asabviswe muFSF.
Pindura Luigino Bracci Roa
Nyore, vanyunyuti vanoita forogo yavo.
Iwo maneja eMesa 21.0 akatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzavo